Nhau - Musiyano uripo pakati pekudengenyeka mota uye yakajairwa mota
Musiyano uripo pakati pekudengenyeka mota nemota yakajairika
Iyo mota yekudengenyeka yakagadzirirwa negadziriro yezvinogadziriswa eccentric mabhureki kumagumo ese eiyo rotor shaft, uye simba rekusimudzira rinowanikwa necentrifugal simba rinogadzirwa neyekumhanya-kumhanya kutenderera kweiyo shaft uye eccentric block. Iyo vibration frequency renji yeiyo inodedera mota yakakura, uye mechnical ruzha runogona kudzikiswa chete kana simba rekusimudzira pamwe nesimba zvakaenzana. Iko kune matanhatu mabhenji e vibration motors zvinoenderana neyekutanga uye yekushandisa nzira uye yekumhanyisa kumhanya.
Kazhinji mota inowanzozivikanwa se "mota" zvinoreva mudziyo wemagetsi unoona shanduko kana kutapudzwa kwesimba remagetsi zvinoenderana nemutemo wemagetsi emagetsi. Iyo mota inomiririrwa netsamba M mudunhu (muyero wekare ndiD). Basa rayo guru ndere kuburitsa mota yekutyaira. Seye sosi yemagetsi yemidziyo yemagetsi kana michina yakasiyana, jenareta inomiririrwa netsamba G mudunhu. Basa rayo hombe basa ndere kushandura magetsi simba kuita simba remagetsi.
Ndeupi musiyano uripo pakati pekudengenyeka mota uye yakajairwa mota?
Chimiro chemukati cheiyo vibration mota yakafanana neiyo mota yakajairwa. Musiyano mukuru ndewekuti iyo vibration mota ine seti yezvinogadziriswa eccentric mabhureki kumagumo ese eiyo rotor shaft, uye simba rekusimudzira rinowanikwa necentrifugal simba rinogadzirwa neiyo yekumhanyisa-kutenderera kweiyo shaft uye eccentric block. Vibration motors inoda yakavimbika anti-vibration kugona mune zvemagetsi uye zvemagetsi maficha pane zvakajairika mota. Iyo rotor shaft yemudhudhudhudhudhudhudhudhudhudhudhudhudhudhudhudhudhudhudhudhudhudluzha yeiyo magetsi nhanho iri mukobvu yakawanda kupfuura iya yemazuva mota yemwero wakaenzana.
Muchokwadi, kana iyo yekudengenyeka mota yagadzirwa, iyo inoenderana clearance pakati pemubato uye inotakura yakasiyana neiyo yakajairwa mota. Iyo shaft uye kutakura kweyakajairwa mota zvinofanirwa kunge zvichinyatsoenderana, uye iyo inoenderana clearance pakati pemubato nekutakura mumudhudhudhu mota inotsvedza inokodzera. Pane mukaha we0.01-0.015mm. Ehe, iwe unonzwa kuti iyo shaft ichafamba kuruboshwe uye kurudyi panguva yekugadzirisa. Muchokwadi, iyi clearance fit ine basa rakakosha.